भर्खरै सरकारले ल्यायो नसोचेको नियम ! भारतबाट १ लाख मान्छे भित्रँदै, नेपालको भयावह अवस्था.. – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/भर्खरै सरकारले ल्यायो नसोचेको नियम ! भारतबाट १ लाख मान्छे भित्रँदै, नेपालको भयावह अवस्था..
कपिलवस्तु – भारतबाट आएका थप १० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कपिलवस्तुमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १५ पुगेको छ ।
काठमाडौंको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उनीहरुमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको आज बिहान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको मुम्बईबाट लुकिछिपी आएका कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका दुई र यशोधरा गाउँपालिका– ५ का आठ जना युवामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।
आठ युवक वैशाख २० गते मुम्बईबाट आएर अनिरुद्ध पब्लिक माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । अनिरुद्ध र पशुपति शिक्षा मन्दिरको क्वारेन्टाइनमा रहेका ६२ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएकामा आठ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ज्योतिप्रकाश दुबेले बताए ।
बुद्धभूमि– ७ मानपुर र वडा नं १० धनकौलीका एक÷एक जना युवकमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य संयोजक डोलविक्रम बेल्वासेले जानकारी दिए। गोरुसिङ्गेस्थित गौतमबुद्ध बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा रहेका १२५ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा दुई जनामा कोरोना देखिएको हो । गोरुसिङ्गेको क्वारेन्टाइनमा २१६ जना रहेको संयोजक बेल्वासेले बताए ।
सङ्क्रमितलाई कोरोना विशेष अस्पताल बुटवल पठाउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ । यसअघि मायादेवी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा पाँच जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । source : onlinetv
नेपाली बैज्ञानिकको दाबी : काठमाडौं लगायतका सहर जोखिम बन्दैछन् (भिडियो सहित)
पाटीमा बस्ने परिवारलाई कोठामा लगिदै। हेनुहोस यो खुसीको भिडियो।
४० बर्षिया महिलाको ब्य’था- बिहेअघि कुमारी नै थिए त्यो मेरो विवाहको पहिलो रात थियो सत्य कथाः
लकडाउनका कारण काठमाडौंमा विद्यार्थीको पीडा : कोठामा रासन छैन ( भिडियो )